म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला !
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापनजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारामा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा आज मैले राम्रो असल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जान कारी गराएको छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । भन्ने विश्वासलागेको छ।
यस कारणा पनि मैले त्यस्सतो खालको केटा खोजेको हो । आजकाल यस्ता खालका फेसबुक पोष्ट, पत्रिकामा विज्ञापन भेटिन्छन् । त्यही विवरण यहाँ पेस गरेका हौँ ।यस्ता बिज्ञापन धेरै आउने हुँदा जापान जान चाहानाहुने राम्रो सङ बुजेर मात्र अघि प्रक्रिया चाल्नुहोला ।तस्बिर@ सान्केतिक प्रयोगको लागी मात्र
भिजिट भिसा : दुबईको चोकचोकमा नेपाली अलपत्र
यहि छाप्रो भित्र श्रीमती मरिन , छोरा छोरी विदेश छन् तर विचार मनि प्रसाद बुवाको यो हालत भिडीयो
आफ्नै भाइले दाइको घाँ,टी रेxटेxर हxत्या
एमालेका दलित महिला वडा सदस्यको मृत्यु